လင်္ကာ: လွှတ်တော်မလိုသော ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုမှုစာသားပြောင်းလဲခြင်း
မီဒီယာမှာ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုခြင်းစာသားပြောင်းလဲပြင်ဆင်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အင်တာဗျူးတွေကို နားထောင်လိုက်ရတဲ့အခါ…ပညာယူစရာ၊ဆင်ခြင်နိုင်စရာ၊မှတ်သားစရာတွေ မကြားရပဲ.. အာဏာကို ဘယ်လောက်ငန်းငန်းတက်နေသလဲ ဆိုတာလူသိအောင် ကိုယ့်အထုတ်ကို ဖြည်လိုက်တာပဲ အဖတ် တင်သွားတယ်…။ ဦးအောင်သောင်း တို့ ဦးဋ္ဌေးဦး တို့ အင်တာဗျူးတွေ နားထောင်ကြည့်ပါ… တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြသနာကို..အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလည်းဆိုတဲ့..အရိပ်အရောင် တခုမှ မတွေ့ရ ဘူး….
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က နေရာအများစု နိုင်သွားတဲ့ အပေါ်ကလဲ့စားချေ လိုတဲ့မထိတထိမျက်နှာပေးတွေနဲ့…..ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခြင်းစာသားပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရေးကိစ္စမှာ..သူတို့ကအထက်စီးကရှိနေလေတဲ့လေသံတွေနဲ့ပြောဆိုနေတာတွေ့ရတော့..အတော်စက်ဆုတ်မိတယ်ဗျာ။ မိမိ အတ္တက လွဲလို့..တိုင်းပြည်အရေးအတွက် အမျှော်အမြင်မရှိသူများအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
အမှန်တကယ်က တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ဦးမော့စေချင်တဲ့ စေတနာကောင်းသာရှိမယ် ဆိုရင်…တိုင်းပြည် စီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်လုပ်ဘို့လိုပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ဆောင်ဘို့ဆိုတာ…မိမိနိုင်ငံတံခါးကိုပိတ်ပြီး…ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးလုပ်ဆောင်ဘို့ဆိုတာ… ဆိုရှယ်လစ် ခေတ်မဟုတ်တော့ပါ….။နိုင်ငံတကာအကူညီအများကြီးလိုပါတယ်…ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး တိုင်းပြည်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေလိုက်စုံစမ်းကြည့်ပါ….သူတို့သားသမီးတွေ ဆွေမျိုးတွေအကုန်
နိုင်ငံတကာလွှတ်…သူတို့ကိုယ်တိုင်က…၀တ်ထားတဲ့အ၀တ်..စီးထားတဲ့ဘိနပ်…ကအစ နိုင်ငံခြားဖြစ်မလွတ် ပါးစပ်ဖျားစကားက လွဲလို့ ဘယ်သူမှ လက်တွေ့ကျင့်ကြံတာမရှိ…၊ ဒီတော့…သေချာအောင်ထပ်ပြောချင်တယ် နိုင်ငံတကာအကူညီလိုတယ်….တရုတ်လောက် ထိုင်းလောက်နဲ့ မြန်မာပြည်ဦးမမော့ဘူး စိတ်ချ……အထူးသဖြင့် အနောက်အုပ်စုရဲ့စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှု့ အများအပြား လိုတယ်……။ အနောက်အုပ်စုက စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုတ်နှံသူတွေ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကို ၀င်ရောက်လာဘို့ လိုတယ်…..။ဒါမှ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ဦးမော့မယ်….။ သူတို့ ဘယ်လိုရောက်လာနိုင်မလည်း…………….။
* တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့အခါ
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းပြေလည်အောင်….လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာရော ပြည်သူကပါ..ထောက်ခံမှု့အပြည့်အ၀ရထားတဲ့..အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ပြေလည်ဘို့လိုပါတယ်…..
ဒီလို မပြေလည်သမျှ ကာလပတ်လုံး….ဘယ်အနောက်အုပ်စု စီးပွားရေး အုပ်စုကမှ ၀င်ရောက် မလာတဲ့အပြင်…. စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ ထားမှု့ ပွင့်လင်းလာရေးကို လည်း.. မျှော်လင့် လို့ မရပါဘူး……။ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသာယာဘို့…တရားဥပဒေစိုးမိုးဘို့လိုပါတယ်…လက်နှက်ကိုင်တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုများနဲ့…ချစ်ကြည်ရင်းနှီးပြီး..စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရှိဘို့လိုပါတယ်…..။
ဒီအချက်ကို ပြည်သူတွေကလည်း မျှော်လင့်ကြတယ်…..သူတို့ မျှော်လင့်ချက်တွေ အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ဘို့….ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့…အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ပုံထောက်ခံကြတယ်….ပုံမဲပေးကြတယ်…….မဲအောင်နိုင်တယ်….ပြည်သူတွေပျော်ကြတယ်…..။ ဒီလို အပျော်တွေက မကုန်သေးခင်ပဲ….လွှတ်တော်ထဲဝင်ဘို့ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရေးစာသား အခက်အခဲက…လာခုနေလေတော့ ရှေ့ကိုဘယ်လိုခရီးဆက်ကြမလဲ…… စဉ်းစားစရာတွေ… ရင်မောစရာ တွေဒေါသထွက်စရာတွေအပြည့်နဲ့…..အမျိုးမျိုးသောဝေဖန် ချက်တွေအပြည့်နဲ့။
ဒီနေရာမှာ ပြသနာတခုက…ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရေးစာသား ကိစ္စမှာ NLD လုပ်ရပ်မှန်တယ်ဆိုတာ ကျနော် ထောက်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ….သို့သော် NLD အနေနဲ့ ပြောလို့မရတာတွေ…မပြောသင့်တာတွေ သူတို့မှာ ရှိတယ်…ဒါကဘာလို့လည်းဆိုတော့…အစိုးရနဲ့နားလည်မှု့တည်ဆောက်နေဆဲကာလ….အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးတံခါးကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ဆဲကာလများဆိုတော့….အပြောအဆို..အနေအထိုင် သတိ ထားရတယ်…အရာရာသတိထားရတယ်…အယင် NLD မဟုတ်ဘူး…..။ လူထုက တခါ.. အာဏာ အပ်နှင်းထားခံ ရတဲ့ ( Mandate power ) တရားဝင်ရထားတဲ့ ပါတီ….။နိုင်ငံတကာရော…အစိုးရရော ပြည်သူများကပါ…အချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ ပါတီ…။ ဒီတော့..သူတို့ရဲ့ပြုမူဆောင်ရွက်…ပြောဆိုချက်တွေဟာ…အရပ်ဆန်လို့ မရဘူး… ထင်တာတွေ… ခန့်မှန်းတွေနဲ့လျှောက်ပြောလို့မရဘူး….။ဟိုကွေ့ကို ဟိုတက်နဲ့လှော်. .ဒီကွေ့ကို..ဒီတက်နဲ့ လှော်လုပ်လို့ မရဘူး……။ ကတိတွေကို လွယ်လွယ်ပေးလို့မရဘူး….။ ဒီအချက်တွေကိုတည်မှီပြီး….အခွင့်သာခိုက် အလစ်ချောင်းတိုက်ခိုက်ချင်သူများကလည်း…..လက်လှမ်းမှီရာ…ဒသန အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ကြပေါ့။
သို့သော် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ကံကောင်းတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့…အစိုးရဘက်က ပြုပြင်ပြောင်းလည်းရေးကို လိုလားသူ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်လို…..လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းလို လူမျိုးတွေ ပေါ်ပေါက်လာလေတော့…..နည်းနည်းတော့…..အနာဂါတ်ရောင်ခြည်တန်းလေးမြင်နေရပြီလားလို့တွေးမယ်ဆိုတွေးနိုင်ပါတယ် ( ဒါပေမဲ့ မသေချာသေး )။….ဒီနေရာမှာ ကျနော် ရင်ထဲ ကလိ ကလိဖြစ်နေတာ ရှိတယ်…..ဒါက….ဦးဋ္ဌေးဦး နဲ့ ဦးအောင်သောင်းအင်တာဗျူးကိုနားထောင်လိုက်ရတဲ့အခါ… ဘာသွားတွေ့ရသလည်းဆိုတော့…..ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးသိန်းစိန် တွေ့ဆုံခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလာဒ်တွေအပေါ်သိပ်အစာကြေချင်ပုံမရဘူး….ဦးသိန်းစိန်ကိုလည်း…အထက်လူမို့သာ…သီးခံထားရတယ်..သိပ်ကျေနပ်ချင်ပုံမရဘူး…. .ဦးဋ္ဌေးဦး ပြောတဲ့စကားတွေမှာဆို…သဘောက…ခင်ဗျားတို့ နဲ့ပြေလည်တဲ့ သမ္မတက..သူ့ပါဝါ ရှိသလောက် သူလုပ်ပေးပြီးသွားပြီ…..အခု ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုရေး စာသားပြောင်းလည်းပေးဘို့ ကိစ္စက သမ္မတ တယောက်ထဲ လုပ်လို့မရဘူး…..ကျုပ်တို့ လွှတ်တော်က…လုပ်ပေးမှရမှာ….ဒီအလုပ် ကျုပ်တို့ မလုပ်နိုင်ဘူး…လုပ်မပေးနိုင်ဘူး…(ဒီအဓိပ္ပါယ်သက်ဝင်နေတယ်)….နောက်တခါ…ဒီစာသားပြသနာဆိုတာ… .ဘာမှ အရေးမကြီးတဲ့ပုံစံ…( NLD ဘက်က ဘယ်လောက်ပဲ အရေးကြီးတယ် သဘောထားထား ) ပြင်ရမယ်ဆိုရင်တောင်…လွှတ်တော်မှာ အဆိုတင်…မဲခွဲ…၇၅ % စသဖြင့်ပေါ့… ..လုပ်ရမှာ… အရေးမကြီးတဲ့..ကိစ္စမို့ မလိုအပ်………..။ အခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာ ( Amandment ) ကို အလိုမရှိ……….။
လူကြီးမင်းတို့ပြောသလို..စဉ်းစားတွေးခေါ်လုပ်ဆောင်နေသလို….ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုရေး စာသားပြောင်းလည်းပေးဘို့..ကိစ္စမှာ…ခင်ဗျားတို့လိုလူတွေ မလိုအပ်တဲ့…လွှတ်တော်လည်း ဘာမှ မလိုအပ်ပဲ လုပ်လို့ရတဲ့…သာဓက တွေ…ကမ္ဘာမှာရှိခဲ့ဘူးတယ်…ဒါကို ကျနော် ထောက်ပြမယ်……။
Informal amendment ( အခြေခံဥပဒေ၏သာမာန်အစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်ခြင်း)
နိုင်ငံတော်တော်များများက အခြေခံဥပဒေများကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ…..ဘယ်နိုင်ငံမှာ ပြည့်စုံတဲ့ ဟာမရှိဘူးဆိုတာ..၀န်ခံထားကြပါတယ်…သို့သော်လည်း..တတ်နိုင်သလောက်..ပြင်ဆင်စရာမလိုအောင် ပြဋ္ဌာန်းထားတာတွေရှိပါတယ်…။ ဥပဒေတွေထဲမှာ..အားနည်းချက်တွေလည်းရှိပါတယ်..။ လုံးလုံလျှားလျှား ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ဘို့ လိုအပ်လို့ပြင်ဆင်လိုက်ရတာကို ( Amendment ) လို့ခေါ်ပါတယ်….။
ဒါကတော့..အခြေခံဥပဒေထဲမှာပါရှိတဲ့…အဓိကအရာ ( Main Article )ကို ပြုပြင်ခြင်း ၊ ပြောင်းလည်းပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း ၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်……။ အဓိက ( Main Article ) မဟုတ်ပဲ…အဲဒီ့ အထဲက..လိုအပ်နေတဲ့ နားလည်မူ့လွဲမှားသွားစေနိုင်တဲ့…အဓိပ္ပါယ် အမျိုးမျိုးထွက်စေနိုင်တဲ့ အချက်အလက်အချို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကိုတော့ ( informal amendment ) လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဓိက ( main article ) ကိုပြုပြင်ခြင်းအတွက်….အားလုံးသိနေကြသလို….လွှတ်တော်နှစ်ရပ် မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း မှထောက်ခံ၊ လူထုကလည်း အတည်ပြု စသဖြင့် ( ဦးဋ္ဌေးဦး တို့ ဦးအောင်သောင်း တို့ ထင်နေသလို ) လိုအပ်သော်လည်း…….Informal amendment ပြင်ဆင်ခြင်းမှာတော့…ဒါတွေ မလိုအပ်ပါဘူး….။
What are the five ways that the constitution can be informally amended?
Five methods to informally amend the Constitution
a. Details were added by Congresses
b. Ways it interprets the Constitution and carries out its duties
2. Executive Actions
a. Presidential use of “Necessary and Expedient Clause”
b.2terms per President
( Link -http://dhsvideo.tripod.com/id2.html )
အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များကတော့ အမေရိကန် အစိုးရက ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ ( အခြေခံဥပဒေ၏ သာမာန် အချက်အလက်များကို ပြုပြင်ခြင်း - informal amendment ) ပါ…..။ အားလုံးကို တချက်ခြင်းရှင်းပြနေရင် ပေရှည်ပြီး လိုရင်း မရောက်မှာမို့….အဓိက အချက်ကိုပဲ တင်ပြပေးပါ့မယ်…..။ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့သလို…..informal amendment ကို လွှတ်တော်မှာတင်ဆွေးနွေး ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းထောက်ခံ လုပ်စရာမလိုပဲ….သမ္မတ အခွင့်အာဏာနဲ့ လုပ်လို့ရကြောင်း…အပိုဒ် ( ၂ ) မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကားမှာကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ သာဓက ကိုတင်ပြချင်ပါတယ်….အမေရိကား ပြည်တွင်းစစ်အပြီးမှာ ကျွှန်များကို လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးတဲ့အကြောင်း ကွန်ဂယက် ( မြန်မာပြည်လိုဆို လွှတ်တော် ) ကနေ ဥပဒေ ကျမ်းကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အခါ ကျွှန်အများအပြားဟာလွတ်မြောက်သွားခဲ့ ပါတယ်… သို့သော်ပြသနာက ဘာဖြစ်သလည်းဆိုတော့…ကျွှန်အများပြားကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ ကျွှန်ပိုင်ရှင်များက….ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ရဲ့ဟာကွက်ကို ထောက်ပြီး….ကျွှန်များက မွေးဖွားလာတဲ့ သားသမီး မျိုးဆက်များကို တော့ လွတ်မြောက်ခွင့်မပြုဘူး….အဲဒီမှာတင်…အရေးပေါ်အနေနဲ့ ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကနေ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်တဲ့မျိုးဆက် (descendants) ဆိုတာ ထပ်မံဖြည့်တင်း ပေးခဲ့ရပါတယ် လွှတ်တော် မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး….ဥပဒေပါ စကားလုံးများဟာ ဘယ်လောက် အရေးကြီးသလည်းဆိုတာ…မှတ်သားစရာပါ….( ဥပမာဆိုပါတော့..အဲဒီနေရာမှာ…Descendants အစား Sons and daughters ဆိုတာ ဖြည့်တင်းလိုက်ရင် ဘာဖြစ်နိုင်မလည်း….မြေးတွေ မြစ်တွေ တီတွေ တွတ်တွေ ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့…..)အလားတူ လွှတ်တော် မလိုပဲ…ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက်ကို ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံမှာလည်းကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်။အခြား ကျနော် လေ့လာ မသိရှိသေးတဲ့ နိုင်ငံများလည်း ရှိဦးမှာပါ…..။
ကျမ်းကျိန်စာသားပြောင်းလည်းရေးကိစ္စဟာ တကယ်တော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ( Main Article ) ကိုပြောင်းလည်းခြင်းမဟုတ်ပါဘူး…အစိတ်အပိုင်း ( portion ) ကိုသာပြောင်းလည်းခြင်းဖြစ်သည့် အတွက် လွှတ်တော်မှ အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ပေးဘို့ မလိုအပ်ပါ….တစုံလုံးကိုပြောင်းလည်းခြင်း ( Amendment ) လုပ်ရန်မလိုပါ။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံက ဖြစ်နေတဲ့ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုရေးစာသား အပြောင်းအလည်း ကိစ္စမှာ ပထမအဆင့် အခြေခံဥပဒေ ခုံရုံး ( အခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ ဗဟိုတရားရုံးချုပ် )ကနေပယ်ချလိုက်ပါတယ်….သို့သော် ပြသနာမရှိ…သမ္မတ ရဲ့အခွင့်အာဏာကျန်ရှိနေပါသေးတယ်…
တကယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နားလည်မှု့တစုံတရာရှိမယ်…..သမ္မတဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂါတ်အတွက် အမျှော်အမြင်ရှိသူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်..စိုးရိမ်စရာမလိုလောက်ဘူးလို့ ယူဆရပါတယ်။ပြေလည်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဒီကိစ္စတွေ ကိုကျော်လွန်အောင်မြင်ပြီးလို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ.. လွှတ်တော် အတွင်း လျှောလျှောရှုရှု ၀င်ရောက်နိုင်ပြီး……မိမိတို့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို အကောင်ထည် ဖော်နိုင်မည် ဆိုရင်ဖြင့်….တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးထက် မိမိ အတ္တ မာနများကို… ရှေ့တန်း တင်သော.. ဦးအောင်သောင်း ၊ ဦးဋ္ဌေးဦးလို လူများအပါဝင်…ကြံ့ဖွတ် တယောက်တလေမှ လွှတ်တော်နား မကပ်နိုင်အောင် ၂၀၁၅ မှာ ကြိုးစားကြပါစို့။
( အားလုံးကို လေးစားစွာဖြင့် )